को हुन् आइजी बनेका शैलेश थापा ? यस्तो छ उनको योगदान - Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २३ असार २०७७, मंगलवार २१:४० |
काठमाडौँ – मुलुकको २८औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) मा शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा गरिएको छ । बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक 9एआइजी) थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए।
यही बुधबार रातिदेखि हालका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे अनिवार्य अवकाश लिने भएकाले आज मन्त्रिपरिषद्ले थापालाई आइजीमा बढुवा गरेको हो । हाल उहाँ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग विभागमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएक ा छन् ।
भक्तपुरको कटुञ्जे (हालको सूर्यविनायक नगरपालिका) मा जन्मिएका थापा अब्बल प्रहरी अधिकृत हुन् । विसं २०४९ मा प्रहरी निरीक्षक भएदेखि नै उनी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुँदै आएका थिए । अहिले महानिरीक्षकका लागि पनि थापा पहिलो नम्बरमै थिए । विसं २०७५ असोजमा डिआइजी भएका थापा गत साल चैत ९ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।
थापाको कार्यकाल भने आगामी विसं २०७९ साल वैशाखसम्म रहनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले बुधबार साँझ प्रहरीको स्वागत र बिदाइको कार्यक्रम राखिएको जानकराी दिए ।
विसं २०४९ वैशाख १९ मा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थापा राजधानीबाहिर सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, धादिङ, झापा, कास्कीमा बसेर सेवा दिएका छन् ।
प्रहरी समूहका ९८औँ व्याजमा उनीसँगै हालका एआइजी पाल पनि प्रवेश गरेका थिए । थापासँगै प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका उनकाका सहकर्मीहरु केही डिआइजी त भने केही एसएसपी नै हुन् । नवनियुक्त आइजी थापा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा अब्बल मानिन्छन् । पाल भने कमान्ड नियन्त्रणमा पोख्त छन् ।
प्रहरी निरीक्षक हुँदा प्रतिष्ठानसँगै सल्यान र सिन्धुपाल्चोकमा खटिएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदा धादिङ जिल्लाको नेतृत्व गरेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक भएपछि उनले झापा र कास्की प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हुँदा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तासमेत भए । उनी एआइजी भएपछि भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागको प्रमुख हुन् ।
चार वर्षअघि जयबहादुर चन्द आइजी हुँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए । उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजी हुँदा पनि प्रहरीमा विवाद बल्झिएको थियो । सर्वेन्द्र खनाल डिआइजीबाट बढुवा हुँदा तत्कालीन डिआइजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा ज्येष्ठता, कुशल नेतृत्वकर्ता, कार्यक्षमता, प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने क्षमता लगायतका आधारमा आइजी हुने आधार छ । रासस
Previousकाठमाडौँमा यसकारण बढे कोरोना संक्रमित
Next‘बन्दाबन्दीमा निजी विद्यालयले शुल्क असुल्नु न्यायपूर्ण छैन’
डा. केसीकै कारण पटक पटक चिकित्सा शिक्षा विध्येयकमा अवरोध !
१२ पुष २०७५, बिहीबार १५:०५
पदपूर्तिका लागि सेनालाई लोकसेवाको परीक्षा फलामको चुउरा चपाए सरह
१२ भाद्र २०७४, सोमबार ०६:४८
२७ असार २०७५, बुधबार ०९:३९